Injongo yobalo kubalo
Iimpawu ezinkulu kwiTestamente Endala kunye neTestamente eNtsha
Ubalo lubalo okanye ukubhaliswa kwabantu. Ngokuqhelekileyo yenziwa ngenjongo yerhafu okanye ukuqashwa kwamasosha. Iingxelo zichazwe kwiBhayibhile kwiTestamente Endala kunye neTestamente Entsha.
Incwadi kaNumeri ivela kwigama layo kwiibhendi ezibini ezibhalwe ngabantu bakwa-Israyeli, enye ekuqaleni kwe-40 yamava entlango kunye nomnye ekupheleni.
KwiNumeri 1: 1-3, kungekudala emva kokufuduka kwamaSirayeli eYiputa, uThixo watshela uMoses ukuba abale abantu ngesizwe ukuba bafumane inani lamaYuda angama-20 ubudala nangaphezulu abangakwazi ukukhonza emkhosini. Inani elipheleleyo lifika kuma-603,550.
Kamva, kwiNumeri 26: 1-4, njengoko u-Israyeli ekulungele ukungena kwiLizwe Lesithembiso , kubalwa ubalo-sibini, ukuhlalutya ibutho layo lempi, kodwa nokulungiselela ukulungiswa kwexesha elizayo kunye nokwabiwa kwepropati eKanan. Eli xesha lilonke inani eli-601,730.
Ubalo kwiTestamente Endala
Ukongeza kwimiqulu emibini yemikhosi kwiNumeri, ukubalwa kwamanani abaLevi kwaye kwenziwa. Kunokuba benze imisebenzi yempi, aba bantu babe ngababingeleli ababekhonza ententeni. KwiNumeri 3:15 bafundiswe ukuba bahlule bonke abesilisa abaneminyaka eli-1 ubudala okanye ngaphezulu. Iqela lafika kuma-22,000. KwiNumeri 4: 46-48 UMoses noAron babhalisa bonke amadoda phakathi kweminyaka engama-30 no-50 abafanelekele inkonzo kwiTabernakele kwaye bayithutha, kunye nenani elibalwe li-8,580.
Ekubeni ekupheleni kokulawula kwakhe, uKumkani uDavide wamisela iinkokheli zakhe zemikhosi ukuba zibale ubalo bezizwe zakwaSirayeli ukusuka kwaDan ukuya eBher-shebha. Umlawuli kaDavide, uYowabhi, wayengafuni ukufeza umyalelo wenkosi ukwazi ukuba ubalo lwaphula umthetho kaThixo. Oku kubhalwe kwi-2 Samuweli 24: 1-2.
Nangona kungenakucacile kwiZibhalo, ukukhuthazwa kukaDavide kubalo kubonakala kubangelwa kukuzingca nokuzithemba.
Nangona ekugqibeleni uDavid waphenduka kwisono sakhe, uThixo wagxotha isigwebo, wavumela uDavid ukuba akhethe phakathi kweminyaka eyisixhenxe yendlala, inyanga ezintathu zokubaleka kwiintshaba, okanye iintsuku ezintathu zesibetho esikhulu. UDavide wakhetha isibetho, apho kwafa amadoda angama-70 000.
Kwiyesi- 2 yeziKronike 2: 17-18, uSolomon wathatha ubalo lwabantu bezinye iintlanga kwilizwe ngenjongo yokwabela abasebenzi. Wabala ama-153,600 waza wabela abantu abangama-70 000 njengabasebenzi abaqhelekileyo, abasebenzi abangama-80,000 njengama-quarry entabeni, kunye nama-3,600 njengabaphathi.
Ekugqibeleni, ngeli xesha likaNehemiya, emva kokubuya kwabathunjiweyo eBhabhiloni ukuya eYerusalem, ukubalwa kwabantu ngokupheleleyo kubhalwe kuEzra 2.
Ubalo kwiTestamente eNtsha
Iifenethi ezimbini zaseRoma zifumaneka kwiTestamente eNtsha . Into eyaziwa kakhulu, eqinisweni, yenzeka ngexesha lokuzalwa kukaYesu Kristu , echazwe kuLuka 2: 1-5.
"Ngaloo xesha umbusi waseRoma, uAgasto, wabiza ukuba kubalwe ubalo kulo lonke ubukumkani baseRoma. (Oku kubakho ukubalwa kwabantu kuqala xa uKirinus wayeyinkokheli yaseSiriya.) Bonke babuyela kwiidolophana zabo ukuze babhalise kulo kubalo. Ngenxa yokuba uYosefu wayeyinzala kaKumkani uDavide, kwakufuneka aye eBhetelehem eYudeya, endlwini yakudala kaDavide. Wayehamba apho evela kwidolophana yaseNazarete yaseGalili, wathatha kunye noMariya , umyeni wakhe, ngoku ngokuqinisekileyo wayekhulelwe. " (NLT)
Ubalo lokugqibela olukhankanywe eBhayibhilini lwabhalwa ngumlobi weVangeli uLuka , kwincwadi yeZenzo . Kwindinyana yeZenzo 5:37, ukubalwa kwabantu kwaqhutyelwa kwaye uYuda waseGalili waqokelela okulandelayo kodwa wabulawa kwaye abalandeli bakhe bahlakazeka.
Iinkcukacha Ezingundoqo Zokwazi NgeNew York Colony
Iifilimu zeMmym Best of All Time
Imbali ye-Ecuadorian: Ibali leCantuña
Iintlobo ze-6 zeTogas ezigqithisiweyo kwiRoma yaseMandulo
Yiyiphi "i-Pound-Test" ekubhekiselele kwiLayibha yokuLoba
Uluphi uhlalutyo lweCluster kunye nendlela ongayisebenzisa ngayo kuphando